C45 Miniature Circuit emebi Manufacturers & Suppliers - China C45 Miniature Circuit emebi Factory
C45 2P Miniature Circuit emebi
Ngwa C45 dị na akara nke AC 50Hz / 60Hz, 230V na otu osisi, 400V na okpukpu abụọ, atọ, okporo osisi maka ichebe oke ibu na obere elekere, wee gosipụta ugbu a ruo 63A. Enwekwara ike iji ya maka ntụgharị ntụgharị na-adịghị adịkarị n'okpuru ọnọdụ nkịtị. Onye na-emebi ihe bụ ọdabara usoro nkesa ọkụ na ụlọ ọrụ mmepụta ihe, mpaghara azụmahịa, ụlọ ịrị elu na ụlọ obibi. Ọ kwekọrọ na ụkpụrụ nke IEC60898. Main ụzụ oke Type C45 osisi 1P 2P ...
C45 1P Miniature Circuit emebi